Mayelana NATHI - Zhejiang Anan Lighting Co., Ltd.
Uchungechunge lwe-Fluorescent Tube
Ishubhu le-Halogen Fluorescent
Ishubhu le-Triphorspher Fluorescent
Ukuqhuma Tube Tube
Umbala Wokufanisa Ishubhu
Ishubhu lenyama entsha
Uchungechunge lwe-LED Tube
I-LED Nano Tube
I-PC ye-LED + AL Tube
Ishubhu ye-8FT / 2.4M ye-LED
I-LED Glass + PET Film Tube
I-Tube Water Proof Tube
Ishubhu enemibala ye-LED
I-LED Smart Tube
Uchungechunge lwe-UV Tube
Ishubhu ye-LED BLB
I-LED Plant Ikhulisa Ishubhu
Isilwane Sikhulisa Ishubhu
Ishubhu Lendabuko Le-UVC Germicidal
I-LED Plant Khulisa Lamp
Isibani se-UVC Germicidal
ZHEJIANG Anan Ukukhanyisa Co., Ltd.
Ukwakha ingcebo yamakhasimende, ukudala inkundla yabasebenzi, ukudala inani lebhizinisi, ukudala ukuchuma komphakathi.
Umkhiqizo womhlaba wonke, amakhulu eminyaka Anan
Ukusungula injabulo ejwayelekile yekhaya lika-Ann, ukuze umndeni ngamunye usebenze nsuku zonke ngokumomotheka nokuphila
Sigxila ekutholeni amalambu we-fluorescent aqondile embonini yokukhanyisa, futhi senze ngezifiso izinhlelo eziningi zokukhanyisa nokuthengisa ukuxazulula izinkinga zamakhasimende ngempumelelo, futhi sizuze ukunconywa kwamakhasimende amaningi. Imikhiqizo yethu ithunyelwa emazweni angaphezu kuka-50 kanye nezifunda, njengoba iYurophu, iNingizimu neNyakatho Melika, i-Southeast Asia, i-South Africa, i-Middle East, njll. Futhi ingenye yamabhizinisi amakhulu akhanyisa kakhulu ukuthekelisa imikhiqizo.
WE umoya "ikhasimende kuqala" njengoba injongo yebhizinisi, Njalo usebenzisa ubuchwepheshe obusha, izinqubo ezintsha, ukukhiqizwa inqubo-ngamakhasimende, futhi ngokusebenzisa ISO9001 ukuphathwa uhlelo isitifiketi. Eminyakeni edlule, imikhiqizo ihlolwa uSpot futhi Yakhonjwa kuzwelonke, esifundazweni iQuality and Technical Supervision, ngokuhambisana namazinga kazwelonke. Ngenkathi imikhiqizo nayo iphasiswa i-CQC, i-CE, i-ROHS, i-PSE, i-TUV nezinye izitifiketi zekhwalithi yamazwe omhlaba, futhi yazuza amalungelo obunikazi ayi-15.
Mayelana ne-AnAn Lighting
I-Zhejiang Anan Lighting Co., Ltd. yasungulwa ngo-1999, eyayaziwa ngokuthi i-East Tube Factory ephucukile, iyinkampani ye-tube ye-fluorescent eqondile eyabeka ucwaningo, intuthuko, ukukhiqiza nokuthengisa njengenkampani eyodwa. Inkampani yethu ihlanganisa ama-23 mu kanye nama-workshops kuze kufike ku-10000 square metres. Ngaphezu kwalokho, ngenxa yokuthi ebhodini laseJiangxi, i-Anhui, iFujian neZhejiang, ithrafikhi ilula kangangokuba idinga kuphela amahora angaba ngu-6 ukuya emachwebeni aseNingbo futhi cishe amahora angu-7 ukuya emachwebeni aseShanghai.
Ngaphansi kobuholi be-CEO yethu, uMnu. U-Xu haibo, sakha futhi sinamathela kwifilosofi yokuphatha "egxile kubantu", sihlakulele isiko lezinkampani ezivelele, futhi bonke emndenini bafunda iTi Tzu Kui njalo ekuseni ukuze benze ngokucophelela amabhizinisi anobuchwepheshe ahambisanayo, athembekile, anokuncintisana.
SINIKELA NGAMAHORA E-24 INKONZO KWE-inthanethi
Imikhiqizo emikhulu iqukethe ishubhu ye-fluorescent, ithubhu elingaphezulu kobude, ithubhu lokufanisa umbala, ishubhu lesitshalo nezilwane, ithubhu yokubulala izinambuzane, ithubhu ye-BLB, ishubhu elingenabo ubufakazi bokuqhuma, ithubhu lemibala engokwemvelo nengaphakathi. Izicelo eziyinhloko zifaka indawo yokukhanyisa i-fluorescent, indawo yokupaka izimoto, inxanxathela yezitolo, imboni yendwangu, ukutshalwa kwezitshalo nezilwane, izindawo zokudla, imboni yezokwelapha, ibhange, igalaji likaphethiloli, imayini yamalahle, kanye nezigaba nenye indawo yokuzijabulisa.
Ikheli:No. 6, Yuansan Road, Kaihua Industrial Park, KaiHua Idolobha, Isifundazwe Zhejiang, China